देउवाको भूमिका शंकास्पद : पौडेल समूह « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 11 January, 2021 7:09 am
काठमाडौं, २७ पुस । संसद् विघटनको विरोधमा कांग्रेसले दुई पटक सडकमै उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ । तर, संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्ने वा नगर्ने ? भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिदेखि उब्जिएको विवाद अझै कायम छ ।
संस्थापक नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रम देउवा निवासमै राखिएको थियो । कार्यक्रममा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले अहिलेको राजनीतिक अवस्थाबारे खासै बोलेनन् । तर, सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच भने सवालजवाफ नै चल्यो । देउवा र पौडेलबीच ७ पुसको केन्द्रीय समितिदेखिको मतभेद आइतबार पनि कायम देखियो ।
‘संविधान नै फालेर चुनाव गर्नुको के अर्थ ?’ देउवासँग पौडेलको प्रश्न थियो, ‘प्रधानमन्त्री स्वयं पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले विचार राखेकै आधारमा धम्क्याउँदै छन्, अदालतलाई धम्क्याउँदै छन् र संसद् पुनस्र्थापना हुँदैन भनेर ठोकुवा गरिरहेका छन्, अदालतको ठेक्का लिइरहेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘योभन्दा ठूलो फासीवाद के हुन्छ ?’
सभापति देउवाले भने अदालतमा विचाराधीन विषयमा पार्टीले नबोल्ने अडान राखे । ‘हामी अदालत मान्छौं, अदालतले दिएको निर्णय मान्छौं, यदि संसद् पुनस्र्थापना भएन भने पनि अदालतभन्दा ठूलो अदालत जनता हुन्, हामी जनतामाझ जान्छौँ,’ देउवाले दोहो¥याए ।
पौडेलले संसद् विघटनपछिको राजनीतिक घटनाक्रमबारे बोले । ‘सभापतिजीका कारण कांग्रेसमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ,’ उनले भने । शनिबार देउवाले दिएको अभिव्यक्तिका कारण सरकारको असंवैधानिक कदमलाई बल पुगेको बैठकको निष्कर्ष थियो ।
‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर आन्दोलन गरेपछि पुनस्र्थापनाको कुरा प्रस्ट राख्नुपर्ने हो, त्यसबारे नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र वरिष्ठ नेता पौडेल एकमत हुनुहुन्छ, तर सभापति ज्यूको अभिव्यक्तिले पार्टीको धारणामाथि नै प्रश्न उठेकोबारे छलफल भयो,’ बैठकपछि नेता जीवन परियारले भने ।
देउवाले देशमा राजा आऊ, देश बचाऊ भनेर आन्दोलन चलिरहेका वेला पृथ्वीजयन्ती मनाउन नसकिने बताएका छन् । नेता अर्जुननरसिंह केसीले पृथ्वीजयन्ती मनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘कांग्रेसले लाज मान्नु हुँदैन, पृथ्वीजयन्ती मनाऔँ,’ देउवा निवासमै आइतबार बिहान भएको कार्यक्रममा केसीको प्रस्ताव थियो ।
तर, देउवाले केसीको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेका वेला पृथ्वी जयन्ती मनाउन सकिन्न, यस्तो वेला पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माला लगाउन सकिन्न,’ देउवाले जवाफ दिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट